Vamwe gumi nematanhatu ”MacBook Pros vane matambudziko emutauri | Ndinobva mac
Vamwe gumi nematanhatu ”MacBook Pros vane matambudziko emutauri
Matambudziko ekutanga anotanga kuoneka pane nyowani 16-inch MacBook Pro. Vamwe vashandisi vari kuzivisa izvo vatauri havasi kushanda sezvanga zvichitarisirwa. Izvo zvinofanirwa kuyeukwa kuti aya masipika akaisirwa mune ino komputa modhi ndeimwe yemitambo mikuru yakaunzwa naApple.Iyo ndeimwe yemitambo mikuru yakaunzwa naApple.
Sezviri pachena maspika anogadzira ruzha sekunge irworwo rwadzvanya, inotsamwisa kwazvo uye izvo zvinokanganisa, zveshuwa, mune ruzha mhando yezvaunoda kubereka kuburikidza nazvo.
Vamwe vatauri vanogadzira manzwi asina kujairika
Vamwe vashandisi varikutaura kuti vatauri pane yavo nyowani 16-inch MacBook Pros vari kugadzira kurira kurira, iko zvinotsamwisa uye zvinodzokorora.
Sezvinei iri dambudziko Izvo zviri kuitikawo mune mamwe mamodheru ayo achiri muzvitoro zvakapihwa mvumo neApple vatengesi, kumirira kuwanikwa.
Dambudziko rinomuka, kunyanya kana uri kuteerera kune chero mhando yeodhiyo uye kumbomira. Panguva iyoyo, kana iwe uchida kuenda kumberi kana kumashure, unotanga kunzwa ruzha rukuru rwunoyeuchidza ruzha rwakagadzirwa, patinodzvanya.
Kubva panguva iyoyo zvichienda mberi, ruzha urwu runodzokororwa pese panomira munhu ndokutangazve odhiyo yaive ichiridza pakombuta.
Pari zvino iro chairo dambudziko iri harizivikanwe, kana nhamba chaiyo yevakakanganiswa nekuda kwedambudziko remutauri uyu.
Chinozivikanwa ndechekuti, pamaforamu eApple epamhepo, kune vashandisi vakati wandei vanogunun'una nezve iyi mamiriro uye kubvunza chingava mhinduro kudambudziko iri.
Apple haisati yaziva dambudziko. Isu tinofungidzira kuti sezvo iwe uchigara uchitsigira zviri kukurukurwa mumaforamu uye pakupedzisira kana iwe uchiziva dambudziko, iwe ucharipedza, sezvave kuita kusvika nhasi.
Kana iri Hardware, inodaidza avo vakagadziriswa kuti vagadzirise zvinodiwa. Kana iri software, zvirokwazvo iwe uri kutoshanda kugadzirisa dambudziko nechitsva vhezheni ye macOS.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac makomputa » MacBook Pro » Vamwe gumi nematanhatu ”MacBook Pros vane matambudziko emutauri
Ndakatenga 16 ″ MacBook Pro ine tarisiro huru yekuve nekombuta yakanaka yakagadzirwa neApple, pasati papera mwedzi iyo mamaboard yakakundikana, zvakatora mwedzi ingangoita mbiri kuburitsa imwe nyowani, iyo mushure memwedzi mitatu yekushandisa vatauri vakakundikana. kuti ese maApple software uye Hardware zvine mamwe matambudziko nguva dzese, iyo Steve Jobs mazuva apo zvese zvakashanda zvakanyatsosarudzika.
Wedzera kuwanikwa kune yakasviba modhi muTouch Bar yeMacBook yako
Nomad anotangisa maviri matsva ematehwe ematehwe eApple Watch